3rd December 2020, 12:48 pm | १८ मंसिर २०७७
दार्चुला (छाङरु) : लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको नक्सा प्रकरणपछि सरकारले छाङरु र तिंकर गाउँमा उपस्थिति बढाएको छ। भारतको कब्जामा रहेका भूमिलाई नक्सामा समावेश गरेसँगै छाङरुमा सुरुमा सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपी र पछि गुल्म नै राख्यो। नेपाल प्रहरीको उपस्थिति पनि बढायो। संख्यात्मक रुपमा उपस्थिति बढाए पनि यहाँ उनीहरुका लागि सेवा सुविधा भने एकदमै न्यून छ। सवारी साधनदेखि हतियारसम्म पुरानै प्रविधिमा काम चलाइरहेका छन् खटिएका सुरक्षाकर्मीले।
यस्तै हालत छ त्रिदेशीय सम्वेदनशील मानिने गाउँ छाङरु र तिंकरमा पनि। भारत र चीनसँग जोडिएका यी दुई गाउँमा सुरक्षाकर्मीलाई सकस नै छ। मुख्यत: यहाँ पुग्न बाटो छैन। हिँडेर चार दिन लाग्छ नेपाली बाटो भएर जाँदा। हवाई रुटबाट जानका लागि हेलिकोप्टर छैन। यात्रा गराउने हो भने सेनाको हेलिकोप्टर सुर्खेतबाट आउनुपर्छ। त्यसका लागि प्रक्रिया पनि लामै छ।
अर्कोतिर लिम्पियाधुरादेखि कालापानी र लिपुलेकसम्म कब्जा गरेर बसेको छिमेकी भारतले स-साना कामका लागि पनि हेलिकोप्टर उडाउँछ। जबकि भारतीय सीमापट्टि सडक पनि छ। छाङरुका स्थानीय र दार्चुलाका सुरक्षा अधिकारीहरुका अनुसार भारतले आफ्ना सैनिकको मनोबल बढाउन हेलिकोप्टरदेखि गाडीसम्ममा पर्याप्त लगानी गरेको छ। छाङरु पुग्दा होस् अथवा दार्चुला सदरमुकाम खलंगा नै पुग्दा किन नहोस्, भारतीय हेलिकोप्टर उडेको उड्यै देख्न सकिन्छ। सैनिकका ट्रकहरु पनि गुडिरहेको देखिन्छ।
स्थानीय सुरक्षा अधिकारीहरुका अनुसार भारतले चिया, नास्तादेखि खाजासम्म पनि हेलिकोप्टरमै ढुवानी गर्छ।
भारतीय सुरक्षाकर्मीका लागि हेलिकोप्टरले खाद्यान्न ओसारिन्छ। सामान ढुवानीदेखि जनशक्ति आवतजावतसम्ममा हेलिकोप्टरको प्रयोग भइरहेको हुन्छ। 'हाम्रोतिर त विरामी भयो भने त तत्काल हेलिकोप्टर आउने अवस्था छैन। बोर्डरमा गएपछि थाहा हुन्छ आत्मनिर्भरको कुरा,’ दार्चुलाका एक सुरक्षा अधिकारीले सुनाए।
महाकाली वारि र पारिका दृष्य पूरै अनौठो छ।
‘उनीहरुको चियादेखि जेरीसम्म हेलिकोप्टरमा आउँछ। हामी चार दिन लगाएर हिँडेर आयौं। बाटोमा कहिले स्कुलमा सुत्यौं, कहिले जंगलमा। यहाँ आएपछि बस्ने भवन छैन। राशन पनि बल्लबल्ल आएको छ। हिउँ छल्ने लुगाफाटासमेत छैन। सदरमुकाममा केही मगाउन यातायात तथा हवाई कुनै सुविधा छैन। अर्कै देशमा आएजस्तो भएको छ,’ छाङरुमा भेटिएका एक प्रहरीले भने।
छाङरुका स्थानीय जितसिंह बोहराले पनि भारतीय सैनिकका लागि सबै ढुवानी होलिकोप्टरबाटै हुने सुनाए। ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई हेलिकोप्टरबाटै सबै सामान जान्छ। बाटो भएको ठाउँमा सेनाका गाडीले लैजान्छ। हाम्रो छाङरु र तिंकरका लागि पनि एक छुट्टै हेलिकोप्टर व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक छ,’ छाङरुमा ४० वर्षदेखि होटल चलाएर बसिरहेका बोहराले भने।
छाङरुवासीको माग पनि एक हेलिकोप्टर यो क्षेत्रका उपलब्ध गराइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ। सुरक्षाकर्मीका साथै यहाँका नागरिकको पनि सुविधा हुनेगरी डेडिकेटेड हेलिकोप्टर सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने योगेन्द्रसिंह बोहराले माग गरे। व्यास गाउँपालिका १ का वडाध्यक्ष अशोक बोहरा पनि स्थानीयको मागसँग सहमत छन्। बरु छाङरु र तिंकरका बासिन्दाले स्वामित्व लिनेगरी हेलिकोप्टरको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने यहाँको आवाज छ। यसो हुँदा भारतमाथिको निर्भरता केही कम हुने स्थानीयको बुझाई छ।
यहाँका सुरक्षाकर्मी र स्थानीयले हेलिकोप्टरबाट एउटा स्काभेटर पनि ल्याइदिन माग गरेका छन्। छाङरुमा भएका सुरक्षाकर्मीले सुरक्षाका अलावा स्काभेटर प्रयोग गरेर तिंकर र कौवासम्मको बाटो आफै बनाउनका लागि यसको माग गरेका हुन्। स्थानीय पनि सरकारले छिटो स्काभेटर फाल्दिए हुन्थ्यो भन्नेमा छन्।
दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद कुमार पोखरेल भने छाङरु र तिंकरवासीका मागलाई गृह मन्त्रालयसम्म पुर्‍याउँदै आएको बताउँछन्। छाङरुका लागि आवश्यक परेको खण्डमा हेलिकोप्टरका लागि गृहमा लेखेर पठाउने र गृहले पठाउने सीडीओ पोखरेलको भनाई छ।
‘कोही विरामी भयो, इमरजेन्सी पर्‍यो भने हेलिकोप्टरका लागि गृहमा पहल तथा समन्वय गर्छौं,’ उनले भने।
Surya Pun[ 2020-12-04 03:45:18 ]
देशको हालत यस्तो छ अनि देशको हामी जनताहरु ५० रुपियाँको रातो झण्डा बोकेर काठमाडौं मा एक दिन को लागि घोक्रो सुक्दै देश को सिमा जोगाउ देश बचाउ भन्दै कुरलिन्छौ देश रक्षाको लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी हरु लाई पर्ने आवश्यक व्यबस्था भए न भएको कसले बुझ्छौर ?
Padam Rai[ 2020-12-04 07:53:09 ]
हामि संग चै छैनर ?
गलैचा अनि कार्पेटको नाममा अरबाै मंत्री अनि सभासदको सुबिधामा करोडौं को महगा साधन ठुला अायोजनाको नाममा खर्बाै भ्रष्टाचार गर्न सक्ने ले हामिले पनि सिमानामा सुरक्षाको लागि खटिने सस्त्र कालागी जो बिकट स्थानमा छन् हेलिकप्टर बाट ढुवानि गरेर देसको सुरक्षा गर्ने सुरक्षा माथि दरिलो साहनभुती दिन अाबस्यक छ सरकार हेरेर मात्रै हुदैन काम गरेर देखाउ ???
Ramesh Khadka[ 2020-12-04 04:01:30 ]
नाप्पिएका बोल्ने शैली नभएका पुलिस को नोकोरि गरेर भगबान मै हो भन्ने जति लाई यहि डिउटि दिनु पर्छ अलि दिमाख आउँछ जन्ता लाई दुख्ख दिदी कस्तो हुन्छ भनेर
Ramesh Pradhan[ 2020-12-04 08:24:28 ]
कौवा मा बिओपी राख्ने कुरा के भयो तेतिकै कुरा हराए जस्तोछ। नेपाली सेनाले घेाडेटेा बाटोत बनाइ सकेकोछ सडक पनि सेनाले सुरु गरिसकेकोछ भन्ने कुरा थियो होकि हैन मिडिया पनि चुपचापछ।
B. B. Gurung[ 2020-12-05 04:23:21 ]
स्वार्थी नेताहरु भएको हुनाले भारतीय सैनिकलाइ हेलिक्यपटर बाटै ढुवानीको आवकश पायो । नेताहरुले बेचीसके होल । त्यसैले चूप लग्याछ ।
Rana Negi[ 2020-12-04 12:48:51 ]
सरकारले सेनाको आबस्यकता पूरा गर्नू पर्छ नत्र भने यदि लडाई भयो भने कसरी लडछन त।
Karan Tamang[ 2020-12-04 05:12:43 ]
कुर्चीको लागी झगडा गर्दैमा ठिक्का छ सरकारकेको ध्यानजाओस नेपालको सिमानमा सेना पुलिस माथि 😥😪😛
Prem Kumar[ 2020-12-05 04:53:57 ]
sarkar ko dhyan janu parxa aanfo sena lae bebasthapan garna ta aarmi chip ko jimma honi ta
Kamal Rana[ 2020-12-06 06:36:07 ]
गीठा भ्याकुर खन्दै गर बाबु हो डाउरा बालेर आगो सेक्दै गर नानी हो तेही पनी छैन भने पानी खायर चुपचाप बस 😎😎😎😎😭 मन्त्रीलाई चढ्ने हेलिकोप्टर छैन मंत्रीको बच्चालाई खाने रासन छैन तिउरु आर्मिपुलीसलाई पर्ख न आतीउ आन्दोलन अलि सेलायपछी नेपालकोछेउछाउको भुभाग बेचेर तिमिहरुको पुर्ती गर्दै छन
Kanchha Mogower[ 2020-12-04 09:56:29 ]
नेताहरु झगडामा ब्यास्त छन त्यहा ध्यान कसले दिने???धिक्कार छ नेता भनाउदाहरुलाइ,
Sanjay Acharya[ 2020-12-04 01:18:08 ]
नेपाल गर्ने भनेको नै हेरेको हेर्यै हो
Typhoon Pradp[ 2020-12-05 12:49:25 ]
Prajeen Neupane[ 2020-12-04 06:11:08 ]
😂😂 Ani yesta le ni sima surakxya garxa ??
Kusum Tamang[ 2020-12-05 03:22:34 ]
भारतिय सैनिक हरू त देसलाइ कति माया गरछ कसैले एक इंच भूमि लूटन दिदैन तेही भएर त सुख सुबिदा पौछ त
Pradip Regmi[ 2020-12-06 12:26:07 ]
छिमेकी घोडा चढ्यो भनेर आफू धुरी चढन भएन नि
मनि मैदुङ्ग[ 2020-12-04 02:14:25 ]
बिचरा मेरो देश को जनता 😭
नेटा र प्रशासन सबै भ्रष्टाचार मा लिप्त छ।
सीमा को कुरा धेरै नगरौं अब।
PK Chhetri[ 2020-12-04 02:39:16 ]
Desh ka neta mattrai hoina hami aafai lai pani teha ka Janata sanga tulana garne garau ani teha ko GDP ra hamro pani it’s $27.5 B VS $2.6 T Aakash ra jamin ko farak cha
Gurung Hero[ 2020-12-04 06:16:43 ]
hami nepali dekhashi garerai bigreko ho afnu on ground jo jatti xa usaile dukh sukh gujara garne bani kahile bsalne yo pahilo upaye ho tespachhi sarkhar le pni bujhnu parchha yo hoina ki latta xodum yesari chalnu siknu parchha
Bhola Khanal[ 2020-12-04 10:37:08 ]
नेपाली नेताको बिबेक?
Sushil Kc[ 2020-12-04 01:57:22 ]
Nepal army le garnu pryo xito
Nabin Kingfisher[ 2020-12-06 10:00:39 ]
nepal ma helicopter neta le use gardaima thikka xa
Subhash Singh[ 2020-12-05 01:47:52 ]
Helicopter ko lagi ta neta Bannu parx ni
Bhawani Bist[ 2020-12-04 09:38:30 ]
गुखाने नेता भएपछि के गर्नेत यस्तै हो नि ।
Hem Bohara[ 2020-12-05 02:44:13 ]
यस्तो छ नेपाली को हाल्त अझ ठुलो कुरो गर्छ्न नेता मोहदय हरु अलि कतै लाज हुनु पर्यो नि।।।
Kapil Gyawali[ 2020-12-04 03:36:15 ]
Uta tira ko baato Pani gatilo chaina hai